Ady amin’ny covid-19: napetraka ny arofenitra any an-tsekoly | NewsMada
Ady amin’ny covid-19: napetraka ny arofenitra any an-tsekoly
Par Taratra sur 13/01/2022
Ao anatin’ny ady amin’ny fihanaky ny covid-19 any amin’ny toeram-pianarana dia namoaka ny arofenitra tokony harahin’ny sekoly ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena. Mila hatsangana ny komity mpanara-maso ny covid-19 mba handamina ny efitranon-tsekoly hifanaraka amin’ny ady amin’ity valanaretina ity.
Torak’izany koa ny ora fianarana izay tokony hamboarina sy harindra hifanaraka amin’ny fepetra sakana amin’ny valanaretina. Tsy maintsy hajaina ny elanelana 1m ao an-tsekoly.
Tsy maintsy manokana 5 mn isaky ny taranja hampianarana ny mpampianatra rehetra mba hanaovana fanentanana amin’ny mpianatra any an-dakilasy momba ny fiarovan-tena amin’ny covid-19.
Ny toeram-pampianarana ihany koa dia tsy maintsy mametraka fitaovana fanasan-tanana ho an’ny mpianatra. Ireo ray aman-drenin’ny mpianatra dia ampirisihina mba hanomana ny zanany ny amin’ny fampiharana ny fihetsika fiarovana amin’ny covid-19.
Raha misy trangana covid-19 ao an-tsekoly dia mampandre avy hatrany ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena ny sekoly. Mila hampahafantarina ny ray aman-dreny ny fanapahan-kevitra noraisina aorian’izany.
Arafitra ny lisitry ny “cas contact”
Arafitra anaty lisitra ny “cas contact” rehetra na ireo ankizy nifanerasera tamin’ilay voan’ny covid-19 ary manome izany amin’ny mpiasan’ny fahasalamana eo an-toerana ny tomponandraikitry ny sekoly.
Raha misy trangana covid-19 telo ao anatin’ny kilasy iray dia akatona mandritra ny 14 andro ny kilasy nisy ireo mpianatra. Raha misy kilasy telo nakatona noho ny tranga nisy tao aminy kosa dia mikatona tanteraka mandritra ny 14 andro mihitsy ny sekoly. Ny “prescolaire” kosa dia mikatona avy hatrany raha misy tranga iray miseho.